Koonfurta Kuuriya oo sheegtay inay ka hortagayso Waqooyiga Kuuriya. – Radio Daljir
Abriil 1, 2013 5:31 b 0
Madaxwaynaha dalka Kuuriyada Koonfureed haweeneyda lagu magacaabo Park Geun-hye oo la hadashay saraakiisheeda difaaca ?ee dalkaasi ayaa sheegtay hanjabaadaha xiriirka ah ee kasoo yeeraya Kuuriyada Waqooyi inaysan ahayn mid waxyeelo karta Koonfurta Kuuriya.
“Hadii daandaansiga ka dhanka ah Kuuriyada Koonfureed iyo shacabkeeda uu sii socddo waxaa ay keeni doontaa jawaaab culus iyadoo aaanay jirin siyaasad lagu tixgalinayo Kuuriyada Waqooyi” ayay tiri hogaamiyaha Kuuriyda Koonfureed.
Dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa Maalinmadii sabtida ahayd ku dhawaaqday inay gashay xaalad dagaal oo ka dhan ah Kuuriyada Koonfureed .
Maalinmadii Axaddana Mareykanka ayaa diyaarado dagaal u diray Kuuriyada Koonfureed isagoo balan ku qaaday inuu dhisayo goob difaac ah oo ?looga hortagayo gantaalaha Kuuriyada Waqooyi.
Kuuriyada Waqooyia ayaa siweyn uga caraysan xayiraadda QM ay kusoo rogtay iyo dhoolatuska sanadlaha ah oo ay si wadajir ah u sameeyenn ciidamada dawladda Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed, kaasi oo kadhacay xadka labada dal ay wadaan.
Wasiirka arimaha dibadda ee Kuuriyada Koonfureed ?Yun Byung-se ?ayaa sidoo kale la filayaa todobaadkab magaalada Waashinttoon inuu kula kulmo dhigiisa dalka Mareykanka John Kerry oo ay ka wada hadlayaan arimaha Kuuriyada waqooyi, sidaasina waxaa sheegtay wakaaladda wararka Yonhab.